အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ - The Moon MM
ပရိသတျကွီးရေ ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ အမာခံပရိသတျတှေ ဘယျလောကျမြားလဲဆိုရငျ We Love Group တှအေပွငျ We Love Page တှပေါ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ နိုငျငံကြျောမငျးသမီးတဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကွာသေးမီက ရုံတငျခဲ့တဲ့ “မွကျနု ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ နတေိုးနဲ့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျ အပြိုပေါကျလေးအသှငျကတော့ ကွညျ့ရှူပွီးသူတိုငျး မခြီးကြူးဘဲမနနေိုငျအောငျပါပဲနျော။
နိုငျငံကြျောပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျဖွဈတဲ့အပွငျ ရုပျရှငျထူးခြှနျဆု (၂)ဆုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ထိပျတနျးဝါရငျ့မငျးသမီးတဈဦး ဖွဈပွီးကရြာဇာတျရုပျကိုအပီပွငျဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့သူတဈယောကျပါပဲနျော။
ယခု (၂၀၂၀) ခုနှဈ အတှကျ ပရိသတျတှေ ခနျ့မှနျးကွတဲ့ အကယျဒမီ ဆနျကာတငျစာရငျးထဲမှာ ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ ထိပျဆုံးက ပါဝငျနတောပါ။ ရှကေဈလေးရဲ့ လတျတလော ပရိသတျတှပေါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားစခေဲ့တဲ့ အရာလေးကတော့ အဆိုတျော Ar-T ရဲ့ “ နငျငါ့ကိုမခဈြဘူး ” ဆိုတဲ့ သီခငျြး mtv လေးမှာ အမိုကျစားသရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး “ ကိုယျဘယျလောကျသူ့ကို ပြျောစခေငျြလဲ ဆိုတာလညျးအခဈြပါပဲ ။ ဟုတျလား ပရိတျသတျကွီး ?? နညျးနညျးမှမေယျနျော “ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ခရီးသှားအမှတျတရပုံရိပျတှကေို ဝမြှေလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျထိ Singleအဖွဈနဲ့အနုပညာအလုပျတှကျေုလုပျကိုငျလကျြရှိတဲ့ ရှကေဈတဈယောကျ ခဈြတဲ့သူရှိနပွေီလားဆိုပွီး ပရိသတျတှကေမေးခှနျးထုတျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ရှကေဈတဈယောကျခဈြတဲ့သူရှိနပွေီလားဆိုတာထငျမွငျခကျြလေးပေးခဲ့ပါဦးနျော။
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် We Love Group တွေအပြင် We Love Page တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးမီက ရုံတင်ခဲ့တဲ့ “မြက်နု ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ နေတိုးနဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အပျိုပေါက်လေးအသွင်ကတော့ ကြည့်ရှူပြီးသူတိုင်း မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်အောင်ပါပဲနော်။
နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု (၂)ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထိပ်တန်းဝါရင့်မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီးကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုအပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။
ယခု (၂၀၂၀) ခုနှစ် အတွက် ပရိသတ်တွေ ခန့်မှန်းကြတဲ့ အကယ်ဒမီ ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေတာပါ။ ရွှေကစ်လေးရဲ့ လတ်တလော ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားစေခဲ့တဲ့ အရာလေးကတော့ အဆိုတော် Ar-T ရဲ့ “ နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်း mtv လေးမှာ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း “ ကိုယ်ဘယ်လောက်သူ့ကို ပျော်စေချင်လဲ ဆိုတာလည်းအချစ်ပါပဲ ။ ဟုတ်လား ပရိတ်သတ်ကြီး ?? နည်းနည်းမွှေမယ်နော် “ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ခရီးသွားအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်ထိ Singleအဖြစ်နဲ့အနုပညာအလုပ်တွေက်ုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ ရွှေကစ်တစ်ယောက် ချစ်တဲ့သူရှိနေပြီလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကမေးခွန်းထုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ရွှေကစ်တစ်ယောက်ချစ်တဲ့သူရှိနေပြီလားဆိုတာထင်မြင်ချက်လေးပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ပရိသတျတှကေို လကျဆောငျတှအေမွဲမပေးဖို့ တောငျဆိုလိုကျတဲ့ ရှပေိုးအိမျ